Public Kura | » पहाडी जिल्लामा बढ्दैछन् लामखुट्टे पहाडी जिल्लामा बढ्दैछन् लामखुट्टे – Public Kura
पहाडी जिल्लामा बढ्दैछन् लामखुट्टे
भैरहवा– पछिल्ला केही वर्षयता नेपालका पहाडी जिल्लाहरुमा किटजन्य रोगको संक्रमण बढेको छ । विशेषगरी लामखुट्टेको टोकाइबाट सर्ने रोगहरुको संक्रमण पहाडी जिल्लामा धेरै भेटिएको सरकारी तथ्यांक छ । लामखुट्टे पहाडतिर भेटिनुको विभिन्न वातावरणीय कारणहरु रहेको विज्ञहरुको ठहर छ ।
इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाको तथ्यांकअनुसार गतवर्ष ०७७–७८ मा गण्डकी प्रदेशमा सबैभन्दा बढी १४५ जनामा डेंगुको संक्रमण देखिएको थियो ।
त्यसपछि सुदूरपश्चिम १२५ जना, वाग्मतीमा ७०, लुम्बिनीमा ७३, कर्णालीमा ४८, प्रदेश १ मा २८ र सबैभन्दा कम प्रदेश २ मा ४ जना गरी जम्मा ४८९ जनामा डेंगु देखिएको थियो ।
हिमाली जिल्लामा पनि लामखुट्टे
नेपालमा तराईका जिल्लामा बढी लामखुट्टेको टोकाइबाट हुने बिरामी भेटिने गरेको भए पनि अहिले पहाडमा पनि लामखुट्टे बढेको विज्ञहरु बताउँछन् ।
सवारीका साधन र मानिसहरुको आवतजावत लामखुट्टेका लागि एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सर्ने माध्यम भएको विज्ञहरु बताउँछन् । त्यस्तै ग्लोबल वार्मिङ लामखुट्टेका माथि माथि जाने प्रमुख कारण भएको वातावरणविदहरुको भनाइ छ ।
सन् १८८० यता पृथ्वीको तापक्रम बढेको र नेपालको हकमा पनि त्यो देखिएको काठमाडौं विश्वविद्यालयका वातावरण विभाग प्रमुख डा। रिजनभक्त कायस्थ बताउँछन् । पृथ्वीको बढेको यो तापक्रम नै लामखुट्टेका लागि हिमाली जिल्लाहरुमा समेत बाँच्न उपयुक्त वातावरण रहेको डा. कायस्थाको दाबी छ । मान्यतया १५ देखि ३५ डिग्रीको तापक्रममा लामखुट्टेको विकास हुन्छ ।
वरिष्ठ सरुवा रोग विशेषज्ञ डा। शेरबहादुर पुनका अनुसार डेंगु भाइरस फैलाउने लामखुट्टेका लागि भने २२ देखि ३४ डिग्रीसम्मको तापक्रम निकै अनुकूल मानिन्छ ।
अहिले वर्षा भइरहेको र लामखुट्टेको वृद्धि विकासका लागि उपयुक्त तापक्रम र ह्युमिडिटी भएकाले डेंगीको प्रकोप बढेको उनी बताउँछन् ।
तर लामखुट्टे फैलिनुमा १०० दिनको सिद्धान्त लागु हुने इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका पूर्व निर्देशक डा। बाबुराम मरासिनी बताउँछन् ।
कुनै पनि पहाडी वा हिमाली जिल्लाको तापक्रम मात्रै लगातार १०० दिनसम्म १५ डिग्री सेन्टिगे्रटभन्दा बढी भएमा त्यहाँ लामखुट्टेका लागि प्रजननमैत्री वातावरण बन्दछ ।
प्रजनन अगाडिएडिस जातको पोथी लामखुट्टे एकदमै सक्रिय हुन्छ र यसले एकैपटक ३ देखि ४ जना व्यक्ति र जनावरको समेत रगत चुस्दछ ।
“यसरी प्रजनन् अगाडि लामुखट्टेले धेरैमा संक्रमण सार्न सक्दछ,” डा.मरासिनी भन्छन् ।
सोही अध्ययनबाट सन् २०१४ त्यो समययता पहाडी जिल्लाहरुमा जापानिज इन्सेप्लाइटिस, कालाजार, मलेरिया र डेंगुको संक्रमण बढ्दै गएको पुष्टि डा। मरासिनी बताउँछन् ।
सन् १०१४ अगाडि काठमाडौंमा मात्रै जापानिज इन्सेप्लाइटिस विरुद्धको खोप दिइँदै आएकोमा सन् २०१४ यता देशभर यो खोप वितरण गरिँदै आएको छ । पछिल्ला वर्षहरुमा चुरे क्षेत्रमा समेत लामखुट्टेजन्य रोगको प्रकोप बढेको डा. मरासिनीको अनुभव छ ।